Unyaka omtsha uthathwa njengenye yeentlobo ezinobumnandi, ezivuyayo, ezikhanyayo kunye neentsapho. Kubalulekile ukubamba onke amalungiselelo kwangaphambili, ukutsala umntwana wakho kule nto. Ukuba umntwana usemncinci, akufanele ucwangcise ukuzonwabisa okumnandi kunye nenkampani enkulu. Kungcono ukunciphisa ieholide kunye nezihlobo eziseduze. Kungenxa yabantwana ukuba uNyaka omtsha lixesha lemilingo kunye neenganekwane. Abazali mabazame ukwenza oku.
Igumbi lezingane kufuneka lihlotshelwe iiveki ezimbalwa ngaphambi kokufika koNyaka omtsha. Kumele kukhanye kwaye kukhanye. Kunokwenzeka ukuba unqunyulwe yonke iiflekhi zeqhwa neenqwelomoya eziza kuxoxwa kwiindonga. Kwakhona kuyafaneleka ukudweba imidwebo kunye nomntwana kwaye uyihlobise igumbi lawo. Imihlobiso ingathengwa. Ngoku evenkile ungathenga izitiki ezithakazelisayo kwiifestile. Ngoko ke kulula ukuhluthwa. Kwakhona, iifestile zihlotshiswe ngeeflekhi zeqhwa, zenziwe nge-toothpaste okanye i-gouache. Ukubhengeza igumbi unokuthi uphumelele ngokukhuselekileyo uze uze kunye nento yakho, ingalindelekanga kwaye ingavamile.
UkuKholwa koMthi Krisimesi
Akunakwenzeka ukucinga uMnyaka omtsha ngaphandle komthi omhle. Ingaba yinyani okanye yenzeke, kulo mzekelo kuphela abantu abadala abagqibayo. Abantwana abaselula badala umoya oyingqayizivele endlwini kwaye bajabule. Kwakhona, izithintelo zinegalelo kumoya ophilileyo. Umthi weKrismesi onokuzikhethela ufanelekile kwiintsapho apho abantwana baselula kakhulu. Bathanda ukuzama nokufunda yonke into kwintlungu. Ngako oko, iinaliti eziphazamisayo ziyakuthi ziwatyelele ingqalelo.
Ukuhlobisa umthi weKrisimesi ube ngcono kunabo bonke intsapho, ukuze wonke umntu athathe inxaxheba kule nto. Kuya kuba ngcono ukuba zonke iingubo zenziwe ngeplastiki kwaye zingenakuqhekeka. Okukhethwa ngokukhethekileyo kufuneka kunikwe iityhi eyenziwe ngendlela yezilwanyana zezilwanyana, iifleflakes, iinkwenkwezi kunye neentsimbi. Ungayihobisa umthi ngezandla zakho okanye usebenzisa i-candy. Rebenokobyazatelno kufuneka ithathe inxaxheba ngqo kwizinto zonke. Unako ukunika imihlobiso okanye ukuzimela ngokuzimela. Kungcono ukubeka umthi weKrismesi kwigumbi legumbi ukuze ungaphazamisi. Ngokuqinisekileyo kufuneka ihlotswe ngezibane ezinemibala kunye neetsel.
Isimemo saseSanta Claus
Abantwana abavela kwiminyaka emithathu baya kuba nomdla kakhulu ukubona iSanta Claus, bafumane isipho kuye baze bamthinte. Ngoko ke, abaninzi abazali bazama ukummema ekhaya. Kodwa kukufanelekile ukukhumbula ukuba into entsha kunye engaqhelekanga inomothekayo umntwana. Ngoko ke, kuyimfuneko ukuza kukhetha iSanta Claus ngokufanelekileyo. Kumelwe ukuba abe nelizwi elizityhileyo kwaye inkqubo ayifanele ibe yinto enomsindo. Kwakhona, uBawo uFrost kufuneka akwazi ukulungelelanisa neempawu zomntwana ngamnye nomoya wakhe. Kwaye, kunjalo, kufuneka abe yinto eqhelekileyo.
Abazali kufuneka bakhulume ngamaphuzu kunye noBawo Frost ngaphambi kokutyelela. Kubalulekile ukuqhuba umyalelo wakhe, kuba uyazi kakuhle umntwana wakho. Abantwana abangaphantsi kweminyaka engama-4 akufanele bathathwe ngezandla zabo, ukuba ngaba abayifunayo ngokwabo.
Abantu abadala kunye nomntwana bangafunda inkondlo encinci ukuba uya kuthiwa nguSanta Claus. Kodwa musa ukumphoqa ukuba enze oku. Kwakhona umntwana kufuneka axelele ngubani uSanta Claus kunye nomzukulu wakhe omhle uSnegurochka, apho bahlala khona kwaye bafika kanye kuphela ngonyaka.
Akunakwenzeka ukucinga umNyaka omtsha wangaphandle ngaphandle kwemimangaliso kunye nezipho. Ngokunyamezela ngokukhethekileyo balindele abantwana. Baye bakholelwa kuSanta Claus kwaye banethemba lokuba uya kuzalisekisa onke amaphupha abo. Kukho isithethe sokuba abantwana banike iipesele ngobuninzi kwiholidi. Abaninzi banokuhlupheka ngenxa yokungabikho komzimba. Ngoko ke, ukuba kunokwenzeka, kufuneka kuthatyathelwe ezinye izipho ezintle, kodwa ezingekho phantsi kweyingozi. Ukutya ieskese kumthendeleko kufuneka kulawulwe ngokungqongqo. I-tsokleta kunye neesekese ngobuninzi bunobungozi.
Kufanelekile ukuthunga isikhwama, apho ungafaka khona zonke izipho uze uthi zilethwe nguSanta Claus. Inomdla kakhulu kumntwana kwaye yenza ieholide ibe yinto emangalisayo kunye nemilingo. Kuya kuba lunomdla gqitha ukuvula isikhwama kwaye ufumane zonke izipho ezilungiselelwe.
Ukuba umntwana usenokuthetha ngokucacileyo, ngoko kunye nomama kufuneka ubhale ileta kuSanta Claus. Kuyo inyane liza kuxela malunga nayo yonke iminqweno yakhe. Unokumema umntwana ukuba atende kwileta yemidwebo emihle. Emva koko kubalulekile ukuhamba kunye kwaye uyifake ebhokisini leposi. Amantombazana anqwenela ukufumana iimpahla ezintsha kunye needodoli, kunye namakhwenkwe-ama-locomotive, iindiza, ibhola yebhola kunye neemoto. Umntwana ukhangisa yonke into ekhanyayo kwaye enhle. Ngokuqhelekileyo abantwana bafuna ukufumana i-pet for the Year New, ukuba kukho elo thuba, kubalulekile ukuzalisekisa iphupha lakhe.
Umama wabantwana ekhaya
Ixesha elifanelekileyo lokuqhuba umama wezingane libalwe ukususela ngo-12: 00 ukuya ku-2: 00 ngomhlaka-31 kuDisemba. Unako ukumema iindwendwe zabantwana abancinci abaontanga bonyana wakho okanye intombi. Isimo sifanele sihambelane neminyaka yabantwana. Kubalulekile ukulungiselela amancinci amancinci, awamkela ngawo wonke umntu. Kulungile kakhulu, ukuba bonke abafana banesidingo okanye i-mask carnival. Ukuqhuba umama ekhaya, ungamema uSanta Claus kunye ne-Snow Maiden.
Itheyibhile Yonyaka KaNtsha kaNtsha ingaba lula kumntu omdala. Kumele kubekho iziqhamo, i-salads elula kunye namasketi amancinci amancinci. Ungabhaka okanye uthenge ikhekhe. Imeko ebaluleke kakhulu ekuyiyileni kwetafile yinto yokugcoba kunye nokungaqhelekanga kwezitya. Ukususela kwiziqhamo, unganqumla izilwanyana ezincinane, upheke ama-cutlet amancinci okanye wenze i-milkshake ekhanyayo kunye ne-scopolis kunye ne-strawberries.
Umgaqo obaluleke kakhulu - abantwana ngexesha leemidlalo akufanele bashiye bodwa ngaphandle kokulawulwa kwabantu abadala. Bonke abacima umlilo, abaculi kunye nezibane zaseBangal kufuneka bazitshise kuphela kwisitalato. Oku kuya kunceda ukuphepha izingozi.
Musa ukulinda abantwana abaselula ukuba balwe neentsimbi kwaye baye emthini weKrismesi ebusuku. Mbeke kumntu olalayo kunokuba ngumzuzwana kamva kunokuqhelekileyo, ukuxelela ingxelo yeProd's Frost. Kwakhona kufuneka uxelele ukuba emva kokuba umntwana evuke, umkhwa, unokufumana isipho esilindelwe ixesha elide. Iifestile kufuneka zifakwe ngamakhethini anqamlekileyo, ukwenzela ukuba ukubonakaliswa kwezixhobo zokucima umlilo kungamthinteli ukuba alele. Kwakhona, umnyango uvala ngokuqinileyo, kwaye ingxolo evela kwiindwendwe ayiyi kuvusa umntwana. Oku kusebenza kubantwana abangaphantsi kweminyaka emi-5. Iminyaka eyi-C5 ukuya kweyesi-7, umntwana unengcamango ephakamileyo kakhulu kwaye icinga kwaye ufuna ukuziva iholide yonke ukususela ekuqaleni. Ngoko ke, akufanele bavunyelwe ukuba baye kulala baze balinde ukutshatyalaliswa.
Ngethuba leeholide zeKrisimesi, kunyanzelekile ukuba umntwana ahambe ukusebenza koNyaka omtsha. Kukulungele ukuqhelana nazo zonke iinkqubo ezicetywayo kwangaphambili kwaye ukhethe umntwana ofanelekileyo ngobudala. Abantwana abangaphantsi kwe-3yeya abayi kukwazi ukuhlala ixesha elide endaweni enye, ngoko umboniso awufanele ube mude kunemizuzu engama-30. Umntwana ufuna ukuthenga okanye ukuthunga iingubo zokugqoka. Musa uvila, kufuneka unike abantwana ingqalelo. Iiholide zonyaka omtsha zixesha elifanelekileyo lokuchitha ixesha lokuphumla emoyeni. Abantwana banqwenela ukukhwela kwiidrafti okanye kwiikiti. Ngo teplosemozhno thabatha itiye kunye namasketi. Ukuhamba okunjalo kuya kuvuyisa umntwanakho, kunye nabantu abadala.
Imfundo yengqondo yabantwana kwiintsapho ezingaphelelanga
Ukuphuhliswa kwengcinga yomntwana kwiminyaka yokuqala neyengqungquthela
Uhlobo oluthile lwezakhono zokuphuhlisa izakhono ezifanelekileyo zezithuthi
Unokukunceda njani umntwana ukuba asinde iminyaka engama-3
Yintoni endimele ndiyinyamekele ukususela ekuqaleni kokukhulelwa nangaphambi kokuvela komntwana?
Isaladi kwiintlanzi ukutya okusemathinini
Ukuthatha umntwana wakho
Ukuphulukisa iipropati ze-broccoli
Ukuphululwa kokulala komntwana
Indlela yokufunda ukucula ukuba akukho lizwi?
Umdlali weAton Ash Kutcher
Iindlela zonyango zonyango lweemvumba ze-varicose
Ukutya okunobungozi, into ongayidla, kunye noko ungayidli
Iresiphi yeCherry Pie
Zingaphi kangangeveki intsapho eqhelekileyo yenza isondo?
I-Tomato Soup 2
I-cheesecake kwi-oven microwave
Umvundla onogada kunye namazambane kunye neminqumo